Mamatotra an-taonina maro ny fatorana amin'ny raharaham-panjakana, Jordie Zwarts, nefa tsy mahavita na inona na inona: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 14 May 2020	• 4 Comments
Afaka mifoka ao amin'ny whirlpool ara-bola ianao, araka ny nampiroborobo an'i Robert Jensen ao aminy fampielezana farany, fa inona no mitranga amin'ny volanao? Izaho koa dia nanatona ny fanohanan'ny nanangana ny Bond manoloana ny raharaham-panjakana, Jordy Zwarts (jereo sary), saingy tamin'ny hetsika iray mitovy amin'ny 5G dia tsy nahavita na inona na inona izy. Na izany aza, nanangana euro an'arivony (loharano marobe) izy ary mitovy amin'izay azo antenaina amin'ny fanarahan-dalàna manoloana ny fanakatonana sy ny fepetra mirefy iray kilometatra avy amin'ny fanjakana.
"Fa maninona no vortex ara-bola ary ianao efa milaza fa tsy ho Vrijland izany? Ankehitriny midira hery! Manohana azy ny Café Weltschmertz, manohana azy i Jensen!“Satria ny mpitsara sy ny mpisolovava dia manao fiankinana amin'ny seza fiandrianana (tranon'ny mpanjaka) ary tsy hanimba ny zavatra nianianan'izy ireo tamin'ny fianianana.
"Eny, fa ny fepetra coronavirus dia tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana! Tena hahavita zavatra tokoa ry zareo!"Ny hany zavatra tratrarin'i Jordy Zwarts dia ny fiakaran'ny kaontiny ary i Robert Jensen ("jensbaba33“) Tombontsoa amin'ny fampiroboroboana azy. Mandritra izany fotoana izany dia miandry ianao ary tsy manao na inona na inona.
Mazava ho azy fa mety tena mahalala ny tenanao ianao, nefa nampitandrina anao aho. Heveriko fa tena mila mifoha amin'izay zava-mitranga isika.
Amin'ny alàlan'i Robert Jensen sy i Jordy Zwarts (Federasiona an'ny governemanta federaly) dia manohy ny ataonao amin'ny hafa ianao. Nametraka € 29 ianao ary manantena fa ny mpisolovava iray hametraka fitoriana, izay mety na tsy ho resy. Tena te ho malala ve ianao ary mino fa mpitsara iray no hitsara ny fanjakana? Tsia, tsia. Izy rehetra ireo dia nianiana ny tsy fivadihana tamin'ny satroboninahitra.
Tsy manam-potoana handaniany isika. 1 minitra mialoha ny andro 12. Naneho ny governemanta ankehitriny fa afaka mamadika ny vondron'olona iray manontolo ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ny azo heverina ho tsy mitombina sy tsy azo tanterahina taloha dia natosika tao anatin'ny fotoana fohy. Ny toekarena manontolo sy ny fomba fivelomana miaraka niara-nivadika. Midika izany fa azo atao ny fiovana haingana. Dia afaka haingana be ny fanovana.
Tsy hiandry ny fiovana avy amin'ny governemanta izany na manantena ny fiovan'ny Bon iray manohitra ny raharaham-panjakana. Tsy maintsy manao izany isika! Tsy tokony hamadika ny fahasosorantsika hiandry fiantrana isika dia tokony hampiova ny fahasosorantsika ho hery sy hetsika mivaingana. Ny fampahavokisan-tena, ataovy izany ny tenanao. vakio ny tohizo eto ...
Robert Jensen (jensen.nl) ary 'ajanony ny fanakatonana », izay hoy i Martin Vrijland, dia harato fiarovana
Tags: hanenjanana kokoa, mpisolovava, advocaat, iray sy tapany, fatorana, kafe, de, Featured, lalam-panorenana, Jensen, jensen.nl, Jordy, lockdown, mametraka, raharaham-panjakana, proces, governemanta, Mijanòna, manohitra, Weltschmertz, lena, mainty
14 May 2020 amin'ny 22: 54
Ho an'ireo mpamaky vaovao: ampahafantaro anay hatrany i Freemason fa anisan'ireo klioba ireo izy. Ny isa 33 dia nomeraon-telefaona manan-danja.
Io sivana Jensen io dia maharitra 33 minitra ary Jensen miantso ny tenany hoe Jensbaba33.
Makà ny sary? Ny mpanohitra voafehy.
14 May 2020 amin'ny 22: 55
Afrikana mahery vaika i Baba avy amin'ny iray amin'ireo firenena manodidina ny Hoalan'i Guinea. Nentina an-tsokosoko mpivarotra andevo ary namidy tao amin'ny tontolo vaovao. Nandritra ny fotoana ela dia nitarika fiainana andevo tao amin'ny toeram-pambolena amerikana iray izy, mandra-panafahana azy tamin'ny pirate Redbeard. Hatramin'izay, izy dia iray amin'ireo tsikombakomba tamin'ny kapitenin'ny hijacker natahotra, niaraka tamin'ny Tripod sy Erik, zanak'i Redbeard. Aïcha anabaviny dia andevo tao Algiers, izay maty taorian'ny nanampian'i Erik nandositra ilay tanàna.
Izy io dia lehibe sy matanjaka ary milomano toy ny feso iray. Tsy azony atao ny manonona ny "r", ary tsy midika izany fa tsy mahay izy, satria matetika izy manana hevitra tsara sy fahaiza-mandanjalanja matanjaka. Izany no mahatonga an'i Roodbaard sy i Erik tsy mitsahatra mandamina ny fandaminana ny fanafihana tany mankany Baba.
15 May 2020 amin'ny 07: 00
Eny, be dia be ny b (l) ab (l) a…
14 May 2020 amin'ny 23: 51
Ny antony nametrahan'i Jensen ny sainy rehetra momba ny Fanoherana ny raharaham-panjakana (ary mety hataony rahampitso aza) dia satria tsy afaka mandray andraikitra maimaimpoana maimaimpoana ianao. Tsy maintsy mijanona ao anatin'ny harato voafehy ianao ary indrindra fa aza milomano ary manomboka ny tenanao.
Fotoana hanaovana izany: https://www.fvvd.nl/
« Tokony alainao ve na mandà ny vaksiny Covid-19 raha toa ka voatery mandoa? Ny hatao?
Avereno mivantana ny demokrasia ny lalana fohy noho ny fanakatonana sy ny fanarenana ny toe-karena »
Total fitsidihana: 2.422.562